‘चिसो मान्छे’ मा स्वस्तिमा खड्का
काठमाडौं, १२ भदौ। निर्देशक तथा अभिनेता दीपेन्द्र के. खनालले निर्माण गर्न लागेको चलचित्रमा चर्चित अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको पनि अभिनय रहने भएको छ। फिल्मका निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाले ‘चिसो मान्छे’का लागि स्वस्तिमा अनुबन्धित गरेका हुन्।
लकडाउन अन्त्य भएपछि उनले चलचित्र विकास बोर्डमा दुई चलचित्र ‘चिसो मान्छे’ र ‘लकडाउन’ दर्ता गरेका थिए । जसमध्ये पहिला ‘चिसो मान्छे’ निर्माण हुनेछ। यसअघि दीपेन्द्र र स्वस्तिमाको चलचित्र ‘लभ लभ लभ’ मा सहकार्य भएको थियो । ‘चिसो मान्छे’ मा काम गर्नका लागि स्वस्तिमा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ।
उनलाई आफ्नो भूमिका मन परेको छ । सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण हुने चलचित्रलाई सर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्नेछिन्। अहिले धमाधम कलाकार छनौट भइरहेको फिल्म नयाँ बर्ष अर्थात २०७८ को भदौ ११ गते रिलिज मिति फाइनल गरिएको छ । सो फिल्म डिएस डिजिटल प्रालीको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो ।
अहिले बिषम परिस्थिति भएकोले फिल्मको कलाकार छनौट र प्रिप्रोडक्सनमा आफु लागि रहेको निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले बताए। कोरोनाको कहर केही शान्त हुने बितिक्कै फिल्म छायाँकनमा जाने तयारी भइरहेको उनले खुलाए । लकडाउन अगाडि खनालको फिल्म ‘आमा’ प्रदर्शनमा आएको थियो । जसलाई दर्शक तथा समिक्षक दुबैले मन पराएका थिए ।
ट्र्याक्टरले च्याप्दा एक जनाको मृत्यु